“War muxuu noogu soo laabtay Cawaankan.”. Xiddagaha Man City oo doonaya in kooxda laga ceyriyo Samir Nasri – Gool FM
Pierre-Emerick Aubameyang oo hakad gelinaya heshiis kordhintiisa Kooxda Arsenal… (Sidee ayey wax u jiraan?)
“War muxuu noogu soo laabtay Cawaankan.”. Xiddagaha Man City oo doonaya in kooxda laga ceyriyo Samir Nasri
Byare July 24, 2017
(America) 24 Luulyo 2017. Xiddigaha Man City ayaa waxaa ka soo booday oo ay iska dhex arkeen hab dhaqanka Samir Nasri iyagoo bilaabay inay is waydiyaan sababta kooxda loogu soo celiyay.
Manchester City ayaa raadineysa cid ka iibsata laacibka reer France oo isagu baaris ku aadan dhanka inuu jabiyay shuruucda dawooyinka ay marsiisay UEFA intii uu heshiiska amaahda ah ugu joogay Sevilla xagaagii tagay.
30-jirka ayaa si lama filaan ah loogu soo daray kulankii saaxiibtinimo ay Man City magaalada Houston kula yeelatay kooxda Man United usbuucii la soo dhaafay.
Xiddigaha Man City ayaa is waydiyay sababta loo keenay Mareykanka isla markaana looga soo tagi waayay Ingiriiska si uu kaligii tababarka u sameeyo.
“Kooxdu ma aysan fahmin sababta uu xitaa halkan u joogo Nasri, waxaa aad loogu nacay hab dhaqankiisa cawaandinimada ah. Qaar ka mid ah xiddigaha kooxda ayaa xitaa doonaya inuu dib ugu laabto Manchester.”. War laga helay gudaha Man City ayaa sidaa lagu yiri
Nasri oo isagu 24 milyan lagala soo wareegay Arsenal 2011 ayaa labo sano uga harsan heshiiska uu 120,000 oo bound usbuuciiba uga qaato Man City laakiin kama uusan muuqan qorshaha Pep Guardiola.
Chelsea oo hunguri ka soo galay Sergi Roberto
RASMI: Federico Bernardeschi oo ku biiray kooxda Juventus + Sawirro & Muuqaal